गाईका लागि एम्बुलेन्स र हस्पिटल ! - Enepalese.com
गाईका लागि एम्बुलेन्स र हस्पिटल !
इनेप्लिज २०७२ माघ २० गते २:५८ मा प्रकाशित
माघ २०, सताक्षीधाम (झापा) । सुन्दै अचम्म लाग्ने । गाई–गोरुको उपचारका लागि हस्पिटल । हस्पिलसम्म पुर्याउन एम्बुलेन्स पनि । अबको केही महिनापछि झापाको शिवसताक्षीमा ‘गौ हस्पिटल’ र ‘गौ एम्बुलेन्स’ सुरु हुँदैछ ।
२२ वर्षदेखि भारतका विभिन्न धार्मिकस्थलमा बसेर गाईको सेवा गरेका आचार्य नन्दकिशोर भारद्वाज हाल नेपालमा गाईको संरक्षण अभियानमा जुटेका छन् । भारतबाट आएर गतवर्ष उनले झापाको सताक्षीधाममा ‘गोलोक गोवद्र्धन गौशाला’ नामक संस्था स्थापना गरे ।
वृद्ध र अशक्त गाईलाई संरक्षण गर्नका लागि गौशाला स्थापना गरेको उनी बताउँछन् । ‘वृद्ध गौहरु बजारमा बेच्नु जघन्य अपराध हो,’ उनी भन्छन्, ‘अब त्यस्ता गौलाई हामी पाल्छौँ ।’ स्थापनाको एक वर्षमै गौशालामा लगभग सयवटा गाई छन् । धाम आपिासका स्थानीयबाट उनले गाईलाई आहाराको बन्दोबस्त मिलाईरहेका छन् ।
गौशालाको समिति १७ सदस्यीय छ । चाँडै यस स्थानमा वेद विद्यालय पनि सुरु हुँदैछ । त्यसका लागि विद्यार्थी आउने क्रम जारी छ । विद्यार्थी र कर्मचारीले गाईको हेरचाह गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो संस्था निरीह छ, चलाउन एकदमै गाह्रो छ,’ आचार्य भारद्वाज भन्छन्, ‘तरपनि अहिलेसम्म सरसामा किनेरै चाहिँ ल्याउनु परेको छैन ।’ गौशालाका लक्ष्य धेरै छन् । संस्था स्थापना भएदेखि अशक्त गाईलाई ल्याएर गौशालामा बुझाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । नाजसक अवस्थाका गाईलाई भने ल्याउन असम्भव भएकाले चाँडै नै ‘गौ एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन् ।
क्यानसर भएको गाई
‘इलाम, मोरङ र झापाका विभिन्न स्थानबाट अशक्त गौलाई ल्याएर जिम्मा लगाउने गर्नुभएको छ,’ भारद्वाज भन्छन्, ‘गौलाई नबेच्नुहोस्, हामी पाल्छौँ भनेर बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ ।’ गौशालामा गाईको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यहि अवस्था हो भने आगामी दिनमा गौशालाको क्षमताभन्दा बढी गाई हुनेछन् । ‘यसबारे पनि हामीले सोचिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै हरेक गाविसमा गौशाला राख्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’
उन्नत जानका गाई उत्पादन गर्नका लागि उनले भारतको देहरादुनबाट बीउ गोरु ल्याउँदैछन् । त्यसपछि एक रङ, एक रुप र एक आकारका गाई–गोरु उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाई छ । गौशाला सञ्चालन गर्न महिनामा डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको भारद्वाजले बताए । सबैभन्दा बढी खर्च गाईको उपचारमा भईरहेको छ । ‘मेडिकल खर्च ठूलो छ,’ उनले भने, ’ उनले भने, ‘दिनहुँ डाक्टर ल्याउनु पर्छ, क्यानसर भएकी गौ पनि छिन् यहाँ, केही महिनाभित्रै हामी गौ हस्पिटल सुरु गर्दैछौँ ।’
नेपालको पूर्वी नाकाबाट प्रत्येक रात गाई तस्करी भईरहेको उनको दावी छ । बिस्तारै गौशालाको सङ्ख्या बढाउन सके गाईको तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।